Yaa awood sharci u leh in uu kala diro guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka ? – Somali Broadcasting Service
Yaa awood sharci u leh in uu kala diro guddiga Maaliyadda Golaha Shacabka ?
Arrintan ayaa dood wey ka dhax abuurtay saacadihii aynu soo dhaafnay xildhibaanada Baarlamaanka dhax-dooda.
Iyaga oo ku kala qeybsan cidda awood sharci u leh in ay kala dirto guddiga Maaliyada iyo Miisaaniyada Golaha Shacabka.
Qaar ka mid ah xubnaha guddiga Maaliyada ee la sheegay in la kala diray ayaa warbaahinta u sheegay in xiriir ay la sameeyeen guddoomiyaha Golaha Shacabka oo dalka dibedda uga maqan ku war-galiyay in tallaabadan uu qaaday ku-xigeenkiisa koowaad uusa wax war ah ka heyn, sidaa daraadeed go’aanka guddoomiye ku-xigeenka 1aad uu ku kala diray guddigan noqon karto mid sharci darro ah.
Xildhibaannada oo cuskanaya qodobo ka mid ah sharciyeed ayaa sheegay in marka hore guddiga dhismihiisu uu ku bilaabanayo soo jeedin ka timaada guddoonka Golaha Shacabka, kaddib-na Goluhu si wada jir ah ugu codeeyo sida ku dhigan qodobka 56aad farqadiisa 2aad ee xeer hoosaadka Baarlamaanka, iyaga oo sheegay in sidaa si la mid ah uu guddiga lagu kala diri karo oo ah in Goluhu u codeeyo.
Laakiin Khadiijo Maxamed Diiriye oo ah Wasiirka Dhalinyarradda iyo Cayaaraha islamarkaana ah xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka ayaa sheegtay in aan waxba laga badali karin go’aankii uu gaaray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka sidiisa-na uu u taagnaanayo xitaa haddii sida ay hadalka u dhigtay uu soo laabto guddoomiyaha Baarlamaanka.
Balse aragti taa ka duwan waxaa qaba xildhibaan Prof Maxamed Cumar Dalxa oo sheegay in go’aan kasta oo la gaarayo loo baahan yahay in Golaha la dhax keeno ‘’ Haddii go’aan ama qaraar la gaari karo waa midka Golaha uu gaaro, go’aan uu Gole shacab gaaro ayaa lagu kala diri karaa, Guddi ha noqdo ama Guddoomiye ha noqdo, go’aan gaaris arrinteeda la hal maasha waxaa is ka leh Golaha Shacabka, asiga ayaa awood u siinaya cid kasta ha noqotee”ayuu yiri Maxamed Cumar Dhalxa.
C/qaadir Maxamed Nuur Jaamac la taliyaha guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Soomaaliya ayaa sheegay in kala darista guddiga Maaliyada Baarlamaanka marnaba waafaqsaneyn xeerhoosaadka.
“Guddoomiyaha golaha shacabka BJF wuxuu waajib ka saran-yahay ilaalinta xeerhoosaadka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka federaalka, dooda ka dhalatey kala diridda Guddiga Maaliyadda ma waafaqsana Xeer Hoosaadka golaha, maadaama golaha xilka u dhiibtey isla golaha ayaa awood u leh kala diristiisa”ayuu yiri La Taliyaha Guddoomiyaha Golaha Shacabka C/qaadir Maxamed Nuur.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo dalka Turkiga safar ugu maqan wali war rasmi ah ka soo saarin arrimahan isku murugsan ee ka dhashay Warbixintii guddiga Maaliyada ee la xiriirta wax is daba marinta, waxaase si gaar ah isha loogu wada hayaa sida uu xaalku isku badalo marka uu dib guddoomiyuhu ugu soo laabto howlihiisa shaqo ee Golaha.
Author adminmasterPosted on November 30, 2018 Categories Hot Topics / War Cusub, News, Politics, Puntland, World
Previous Previous post: Itoobiya xabsiga dhigtay Col Gabre oo ahaa sarkaal siweyn looga yaqaanay Soomaaliya
Next Next post: Maamulada Muqdisho iyo Nairobi oo yeelanaya iskaashi labada dhinac ah